प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न, त्यस्तो अल्सर लागेको भए किन उपचार गर्नुहुन्न ? - Sidha News
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा ग्यास्ट्रिक र अल्सर लागेको भए त्यसको उपचारमा किन नलागेको भनेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्न गरेका छन् ।
असोज ३० गते चितवनमा नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टीलाई ग्यास्ट्रिकले गाँजेको र त्यो अल्सर हुँदै क्यान्सरतिर रुपान्तरित हुन लागेको बताएका थिए ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै व्यक्तिको इच्छा पूरा नहुँदा प्रणालीमै र आन्दोलनमै अल्सर छिप्पिएर क्यान्सर लाग्न थालेको भन्न नहुने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले पनि यसका खराबी र अनुशासनहीनताले कतै तपाईंहरूको पार्टीमा पनि ग्यास्ट्रिक, अल्सरको कुरा गर्दै क्यान्सरतिर रूपान्तरण हुन लागेको छ भन्ने ढंगले संकेत गर्न खोज्नुभएको हो कि भन्ने प्रश्नमा यस्तो छ ओलीको जवाफ–
उहाँले कसरी बोल्नुभयो, किन बोल्नुभयो ? त्यो म बुझ्दिनँ, उहाँ पनि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । त्यस्तो अल्सरको किन उपचार गर्नुहुन्न ? म बुझ्दिन । कुनै व्यक्तिको कुनै इच्छा पूरा नहुन सक्छ, नभएको हुनसक्छ । कुनै असन्तुष्टि हुन सक्छ ।
त्यसो गर्दा प्रणालीमै, आन्दोलनमै क्यान्सर हुन लागेको, अल्सर छिप्पियो भन्ने हुँदैन । उहाँसमेत भएर हामीले आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर्याएका छौं । अहिले यति मजबुत स्थिति छ । कमसेकम राम्रो बहुमत छ । प्रदेशहरूमा बहुमत छ।
स्थानीय तहमा बहुमत छ । यस्तोमा तिनै बहुमतलाई राम्ररी सदुपयोग गरेर राम्ररी गाइड गरेर भ्रष्टचारबाट मुक्त राखेर, जनतालाई डेलिभरी दिन सिकाएर र विकासमुखी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यत्तिकै अगाडि बढेको होइन । अवसर यसै आएको पनि होइन । यो ठूलो बलिदान, संघर्ष र त्यागपछि आएको हो । यसमा अनेक विचार मन्थन गरेर आएको हो ।